Henri van Breda oo ah 23 jir ah ayaa Seef ku laayey saddex xubnood oo qoyskiisa ka tirsan – Aabihiis Martin, Hooyadiis Teresa iyo walaalkiisa Rudi, isagoo isku deyay inuu dilo walaashiis Marli, laakiin way ka badbaaday, oo waxay hada ku jirtaa Isbitaal.
Dilkan oo dhacay sanadkii 2015, ayaa waxaa van Breda oo xiligaas ahaa 20 sano jir, uu ku geystay qolka Jiifka ee gurigooda oo ku yaala Koonfur Afrika, waxaana kadib markii gacanta ay ku dhigeen Booliska uu marar badan ku cel-celiyay inuusan isaga dilin.
Hooyadii, Aabiis iyo Walaalkiisa dhamaantooda qoorta Seefta uga jaray halka Walaashiis uu gacanta ka gooyey isagoo isku dayay inuu Khaarajiyo ka hor inta aysan si muc-jiso ah uga soo baxsan goobta, ma ahayn mid caddeymo bixin karta.
Ugu dambeyn, shalay oo Isniin ahayd ayaa maxkamada sare ee Koonfur Afrika u fariisatay dacwadiisa waxaana uu ugu dambeyn uu qirtay van Breda inuu dilay qoyskiisa. Qareenkiisa ayaa maxkamadda uga dalbay Cafis.
Lama oga sababta ku kaliftay inuu laayo qoyskiisa, laakiin Xaakimka maxkamada Siraj Desai ayaa sheegay in natiijada baarista iyo cadaaladu ay tahay mid aanan laga fakan Karin, islamarkaana mar walba ay muhiim tahay in qof walba uu cadaalada maro.
Martin oo ah Aabaha dilaagaan ayaa ahaa Ganacsade Mil-yineer ah, isaga iyo qoyskiisa waxay dhowaan kasoo laabteen dalka Australia kahor inta uusan wiilkiisa falkan ku kicin. Waxay ku noolaayeen magaalada Stellenbosch, ee Koonfur Afrika.
Maxkamada ayaa ku xukuntay van Bredu xabsi daa’in ah, kaasoo uu ku qaadanayo Xabsiga ay ku xiran yihiin 4,336 oo rag, kuwaasi oo 7,000 oo kamid ah lagu haysto dambiyo culus oo dhac iyo dil isugu jira.
Ninkan ayaa dembiga uu galay dartiisa ku waynaya $6 million oo dhaxal ahaa.
Sharciga Koonfur Afrika ayaa qabaa in marka waalidku dhinto waxaa hantidiisa loo qeybiyo dadka xiligaas soo haray, sidaas darteeda lacag $12 million oo dhaxal ayaa hada dhamaanteed la siin doonaa Marli, oo soo kabasho caafimaad ku jirta.
Caalamka 07.02.2018. 10:37
Dilalka Soomaalida South Africa oo kordhay [Akhri Sababta]
Afrika 17.06.2018. 10:44
Weerar Nin Soomaali ah ka fuliyay South Africa oo war laga soo saarey
Afrika 06.07.2018. 16:20